Zakaria Hersi oo qabsaday Nigeria | Somaliska
Wiilka lagu magacaabo Zakaria Abdulkadir Hersi oo ah reer Stockholm ayaa isbuucyadii la soo dhaafay hawada ka qabsaday wadanka Nigeria ka dib markii uu halkaasi ka aasaasay shirkad cusub oo lala dhacay. Zakaria ayaa ah aasaasaha bogga internet-ka Efritin.com oo u sahlaya dadka Nigeria in ay si fudud wax u kala iibsadaan. Aasaaska bogga ayaa waxaa ku baxday malaayiin dollar.
Zakaria ayaa bogga iyo shaqaalihiisa oo hada kor u dhaafaya 150 qof ku dhisay muddo gaaban isagoo sheegay in Nigeria uu yahay wadan adag balse uu diyaar u ahaa loolanka. Bogga ayaa waxaa ka dambeeya shirkada lagu magacaabo Saltside oo Sweden laga leeyahay taasoo Zakaria uu u shaqo bilaabay sanadkii 2012.
Inta uusan u shaqo bilaabin Saltside, ayuu Zakaria horay uga soo shaqeeyay shirkad kale oo lagu magacaabo Besedo, isagoo safaro shaqo ku tagay wadamada Colombia, Mauritus iyo kuwo kale. Balse Zakaria si fudud kuma gaarin horumarka uu sameeyay isagoo dadaal badan u galay in uu gaaro heerka uu maanta joogo.
Shaqadiisii ugu horeysay ayaa ka bilaabatay wadanka Kenya halkaasi oo uu ka abuuray shirkad iibisa qalabka internet-ka, isagoo muddo ka dib ku soo laabtay Sweden. Markii uu Sweden ku soo noqday ayuu go’aansaday in uu shaqo raadsado, isagoo 300 CV u diray shirkado kala duwan isla markaana aan helin wax jawaab ah. Xitaa waxa uu sameeyay in uu magaciisa wax ka badalo, isagoo ka dibna diray 2 CV oo labadiiba loo wacay in uu wareysi u yimaado.
Zakaria ayaa sheegay in shirkadaha waaweyn ee Swedishka ah ay yihiin kuwo qiimeeya qofka halka uu ka soo jeedo balse aan eegeyn waxyaabaha uu shirkada ku soo kordhin karo. Si uu wax uga qabto dhibaatooyinka horyaala dhalinyarada Soomaalida ayuu wax ka aasaasay urur lagu magacaabvo S.A.V.E kaasoo ujeedkiisa ahaa in kor loo qaado heerka dhalinyarada Soomaalida.
Ugu dambeyntii ayuu shaqo ka helay shirkad cusub oo lagu magacaabo Coursio halkaasi oo uu 2 sano ka shaqeeyay, isagoo ka dibna u gudbay shirkada aan kor ku soo xusnay ee Besedo, maantana ah madaxa dukaanka Efritin.com ee hada qabsaday Nigeria isla markaana ay ku baxday lacag malaayiin dollar ah.
Taariikhda uu soo maray Zakaria ayaa cashar u ah Soomaalida ku nool Sweden, in haddii aad dadaal samayso aad gaarayso hadafkaaga. Hambalyo ayaan leenahay Zakaria iyo guul wacan!
Dadaal ku xiran inan magaca bedelo iyo jinsiyada waxay ila tahay inuu yahay mid Dhuuni raac ah mana aha wax waxtaraya mustaqbalka fog qofku magaciisa hunguri u bedelo dhankayga wa dadnimo xumo tii ugu liidatey, iyo iman la aan, Bus Dareewal aya ka sharaf badan magaciisa wata
Waxan leyahay hambalyo zakariya dadaalkaadana hagaaro dadkaga iyo dalkaaga
Masha alaah tabaarakalaah guul iyo horumar ayaan u rajeynaayaa
Xayeysiin miyaa warkaan mise waa war caadi ah. Yarka in lagu amaanayo shaqada dhibka uu usoo maray iyo in shirkada la xayeysiinaayo waan kala garan waayay
Waa in aad fahantaa ujeeda u wiilka u sameyay in u magaciisa badalo oo ah in uu tusayo wadankan cunsiri nimada ka jirto iyo ee shaqada aad shegtayna mah mid u qalanto isag . ee ka fiirso fakarkaga. hanbalyo zakariya and hormar ku rajaynaa waxad aad shegtayna dad badan kula qabo kaligaa ma ah never give upp.
waan idiin salaamey, waa wiil fariid ah, ina adeer wiilka waa Qolomaa micnaha Somali yuu ka yahey ?
August 17, 2015 at 01:11
Maxaa kaa galay cid uu ka yahay Somali?..
Somali waa u soomaali aduunka, kala saar saar maleh aduunku, waxa loo arkaa waa soo maali. Qof Qabiil aaminey waa Qof dhunsan. oo wasakhi ka buuxdo.
Aduunka waxaa lagu wada socdaa isfahan iyo wadaninimo.
Qabiil waxba ma sheego.
intaan isku maqanahay ayaa la ina ku maqan yahay.
aad baan uga helay websideka efritin.com wuxuu u qaab egyahay sida blocket.se well done and good luck.
300 oo CV shaqo ah oo uu diray looma soo jawaabin lkn markii Dambe ee uu magaciisa badalay 2 CV kaliya ayaa loogusoo jawaabtay..!!!!! Taas micnaheedu Waa magaca badala oo Johnsson iyo Andersson labaxa.
August 17, 2015 at 05:48
Mashallah war fiican ayaad qortay maanta sid aku wad, zakariyana hambalyo allah ha ku siyaadiyo camalkaaga,
Webkaagan Jimcalaalow waxaad ka dhigtay meel laisku faaniyow oo ashkhaas aad Gaara ku buun buuniso adoo markii horeba maqaaladaadu mudo lagu caajiso u dhexeeyeen ayaad Halkii maqaal ee bishiiba mar aad soo dhigaysayna noqday mid aad ku faaninayso ama aad ugu Guulwadaynayso dad gaara, adeer ama magaciisa ha badalo ama diintaba ha uga baxo shilimaad yar daraadoode isagay jirtaa taasu, ee akhabaaraadka faaiidada u leh bulshada soo qor ama aan webkaagan faraha kaaga qaadno, anaka kolba calooshiisa u shaqayste somali ah hanoo buun buunine, Nageria qabsaday kuyeeh siduu madax wayne noqday, jaahilnimaa waxaasoo dhan kuu gaysay ee somalida han yaraanta kala tag, niman PHD wax barasho ka gaadhaa jira oo daafaha caalamka wax ka badalay oo somali ahbaa jira intaad anaka waxaan sakaaro ka biirsan noosoo xayaysiinayso, war anfac bulshada u leh la kaalay oo wax ka dheefayaan hadii kale Shame on you, isku xishood xikmad ha lahaadaan waxaad Bulshada dhex keenayso hadii kale aday ku danbarsan aboowe;
Ina Adeer yaal ninkaan Cida uu yahey yaa garanaya walee ninkaan caadi mahann inaan isku tolnahey ayaa wanaagsanaan laheed. ninka yari Somali waa isku mid adeer hurdada ka tooos wax Somali la yiraahdo wey jiri jirtey nin walbaa maanta Calan iyo Baarlamaan u gooni ah ayuu leeyahey
Mnsha Allah wanu ku faraxsanahay cid kasto magaca somali sumcadisa nolaysa
walaalkaada muslim ah says:
asc walaal zakaria mashaa allaah hanbalyo dadaalka aad sameeysan waa dadaal aad u sareeya waxaana loo baahanyahay in aad dhiiri galiso walaalahaaga soomaaliyeed ee kula midka ah lehna aqoontada aad leedahay adiga,NB.waxaad ogataa in jiilka soo koraayo aad u tahay qaf eey ku dayan karaan berito wayoo ardayda waxeey eegtaan ardaygii ka horeeyay iskuulka waxa uu gaaray xaga aqoonta uu gaaray,mida kale dadka soo qoraa wax yaalo aan bulshada u baahneey waxba haka soo qaadan .walaal guuleeso mar kale.asc